कसरी कम गर्न सकिन्छ आत्महत्या ? » Purbihotline
सन् २००८ को आर्थिक संकटबारे ‘मार्जिन कल’ नामक फिल्म बनेको छ। वाल स्ट्रिटनजिकैको अग्लो भवनको छतको डिलमा उभिएको फिल्मको एउटा पात्र भन्छ, ‘तिमीलाई थाहा छ, यस्तो अग्लो ठाउँमा उभिँदा मान्छे किन डराउँछ ? यहाँबाट खसिन्छ कि भनेर होइन, यहाँबाट हाम फालिन्छ कि भनेर डराउँछ।’ आत्महत्याले हामीलाई आकर्षित गर्छ। यसले हाम्रो दिमागको अँध्यारो हिस्सामा एकैपटक भय र सम्मोहन पैदा गर्छ। मृत्युका प्रकारमध्ये यो सबैभन्दा निकृष्ट हुन्छ। आमाबाबुका लागि सन्तानको आत्महत्या सबैभन्दा खराब भोगाइ हो। अभिभावकको आत्महत्याले पनि सन्तानलाई जीवनभर चोट पुर्रुयाइरहन्छ। यो व्यक्तिगत पीडाको मात्र होइन, सामूहिक असफलताको अभिव्यक्ति पनि हो। कसैलाई यो समाजमा बाँच्न साह्रै मुश्किल छ भने दोषी सायद हामी पनि छौँ।
रोगका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका, अति पीडा भोगिरहेका र मर्ने दृढसंकल्प गरिसकेका केही मानिसका लागि आत्महत्या सबैभन्दा कम भयानक विकल्प हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सहयोगमा सुरक्षित इच्छामृत्युको अनुमति दिइनुपर्छ। तर, बर्से्नि आत्महत्या गर्ने आठ लाख मानिसमध्ये धेरैजसोले आवेगमा यो बाटो रोज्छन्। राम्रो स्वास्थ्य सेवा र श्रमबजारसम्बन्धी नीति तथा मादक पदार्थ, बन्दुक, कीटनाशक र हानिकारक चक्की नियन्त्रण गर्न सके धेरैलाई बचाउन सकिन्छ। अमेरिकाले अन्यत्रको प्रगतिबाट सिकेर आफ्नो देशको पीडा घटाउन सक्छ। (our biratnagar )
← कट्रिना भन्छिन्–‘रणवीरसँगको ब्रेकअप मेरा लागि सुन्दर गिफ्ट’
स् शिक्षा नीतिमा रूपान्तरण →
लैगिक विभेद र महिला हिंसा
सम्पादकिय : सपुतको जन्म
January 29, 2019 पूर्वी हटलाइन 0
October 10, 2018 पूर्वी हटलाइन 0